Dobronravov Fedor: Filmography। Fedor Dobronravov को सहभागिता साथ चलचित्रहरू
कला र मनोरंजन, सिनेमा
Fedor Dobronravov को सहभागिता संग फिलिम - सधैं आफ्नो प्रतिभा को admirers लागि भोज छ। अभिनेता कारण वर्ण र धेरै विषयहरुमा कुनै पनि कठिन अवस्था बाहिर सधैं एक बाटो पत्ता क्षमता, तर छोराछोरीको बल को लागि आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका, विशेष गरी लिङ्कमा natured र सधैं हँसिलो इवान Bud'ko श्रृंखला देखि वयस्क द्वारा मात्र होइन प्रेम "matchmakers।" Fedor Dobronravov संग कमेडी तपाईं त राम्रो उहाँले खेल्छ आँसु गर्न हाँस्न बनाउँछ, एउटै भावना अनुभव गर्न, अभिनेता संग फिलिम को हरेक क्षण बिताउन। यो पनि अन्य सबै विधाहरू लागू हुन्छ। त्यो अत्यन्त राम्रो लेख यो प्रतिभाशाली मानिसको बस Filmography छैन देखेको थियो। का जीवनी सुरु र जीवन र हामीलाई यति धेरै सकारात्मक भावना दिनुहुने अभिनेता को कठिन बाटो बारेमा थप जान्न दिनुहोस्।
बाल्यकाल र किशोरावस्था, हाम्रो नायक
Fedor Viktorovich Dobronravov 1961 को शरद ऋतु मा Taganrog जन्म। केटा एक उत्कृष्ट उच्च soprano थियो, त्यो अक्सर विभिन्न संगीत, त्यसैले दृश्य परिचित बाल्यकाल देखि भाग। अब हामी त्यहाँ ठूलो अभिनेता Fyodor Dobronravov छ भनेर थाह छ। हो, उहाँले दृश्य परिचित थियो, र उनको भविष्य बाँध लाग्नुभएको थियो, तर एक ... जोकर रूपमा! Taganrog हुँदा यसलाई यहाँ, एक गर्मी थिएटर थियो, र यो संग नृत्य र सर्कस समूह र एक जोकर Fedor रूपमा काम गरे। पछि, त्यो सर्कस स्टूडियो जान्छ। बास्केटबल, भलिबल, डाइभिङ, बक्सिङ: मान्छे खेल धेरै गर्न थियो किनभने यो पेशामा को मानिस, राम्रो शारीरिक तयारी हुनुपर्छ। उहाँले सपना कार्यान्वयन गर्न हरेक सम्भव तरिका थियो।
जीवनमा सबै सजिला मा आउन
1978 मा Fedor को मास्को सर्कस स्कूल को विद्यार्थी बन्ने दृढ इरादा संग राजधानी आउँछ। तथापि, यो सेना जवान मानिसहरू लिन गर्दैन बाहिर गरियो। उहाँले सेवा पछि फिर्ता आउन प्रस्ताव राखे। र त यो हाम्रो नायक थियो को ड्रम सेना। Dobronravov Fedor जसको Filmography, फिल्म यो याद गर्न त एक पटक भन्दा बढी भन्दा बढी एक दर्जन फिल्म सामेल छन्। र कसैले लाग्यो अघि यदि यो अब तपाईंलाई थाहा, लिपि लेखकहरूले मात्र विचार थियो - आफ्नो जीवन र यो अनुभव थियो।
रचनात्मक प्राण आराम छैन
सेना पछि, Fedor संयंत्र मा फिटर Taganrog काम गर्न गए। उहाँले एक परिवार थियो, यो समयमा जस्तो थियो, अब साँच्चै एउटा कला ... तर मञ्चमा खेल्न आफ्नो सपना परिवर्तन गर्दैन जन्म के। निःशुल्क समय प्रदान गर्दा Fedor, अवैतनिक प्रदर्शन मा लगे थियो रक ओपेरा साथीहरूसँग मिलेर तयार, र यति मा। यस्तो अध्ययन मार्फत उहाँले मास्को मा दुई पटक थियो र सर्कस स्कूल प्रवेश गर्न प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँले विफलता लागि प्रतीक्षा थियो। उहाँले आफ्नो हात प्रयास र कला को वोरोनिश संस्थान को एक विद्यार्थी बन्न सल्लाह थियो एक पटक। Fedor त गरे, र पहिलो पटक गरे।
फेरि मास्को मा
1988 मा, हाम्रो नायक उच्च विद्यालय स्नातक र युवा थिएटर मा काम गर्न गए। वोरोनिश गर्न भ्रमण दुई वर्ष पछि आए Konstantin Raikin, , मञ्चमा Dobronravova देखे जो उसलाई मास्को कुनै पनि हिचकिचाहट बिना थिएटर "Satyricon" मा, आमन्त्रित। Fedor 2000 सम्म त्यहाँ काम गरे। उहाँले प्रसिद्ध मान्छे थाह भयो, म एक अमूल्य अनुभव प्राप्त र फिल्म dabbled। Fedor Dobronravov, जो को मुख्य भूमिका तस्बिरमा मुछिनुभएको मुख्य protagonist रूपमा गर्दै छन्, निकट भविष्यमा अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले, 1993 मा उनले फिलिम "रूसी र्यागसमय" मा एक प्रहरी लप्टन खेले र 1994 मा "शूटिंग स्वर्गदूतहरूलाई" एक शानदार कथा मा प्रतिभा पत्ता लगाउन खोजे। एक सानो पछि, 1995 मा, सर्गेई Ursulyak , खिच्नुभयो नाटक "गर्मी मान्छे" जहाँ Fedor भूमिका Dudakov गर्न accustomed। त्यो पनि हाम्रो नायक को भन्दा को लागि, त्यसैले अप्रत्याशित हो र Filmography Fedor Dobronravov Replenish गर्न थाले।
नयाँ आयु - नयाँ विशेषताहरू
2000 मा, Fedor तिनीहरूले भन्न रूपमा, नि: शुल्क पौडी गर्न जाओ, "Satyricon" छोड्ने निर्णय र। उहाँले चुपचाप वा कसैसँग quarreled को थिएटर बाहिर गए। कि पछि, उहाँले Yevgeny Petrosyan लागि विनोदी लघु कार्यक्रम को लागि विज्ञापनहरु voiced सम्म "छैन खेल्छन्" लेखे Tsekalo Aleksandr अग्रणी प्रसारण sts च्यानलमा "6 शट" हुन उहाँलाई निमन्त्रणा थिएन।
2003 मा, अलेक्जेन्डर Shirvindt उहाँले यो दिन काम गर्दछ जहाँ व्यङ्ग्य, को थिएटर हाम्रो नायक निमन्त्रणा। Fedor नाटकहरु मा "हामी अझै पनि हास्यास्पद", "धेरै विवाहित cabman" र धेरै अन्य चिरपरिचित निर्माण, जस्तै "को अराजकतावादी को आकस्मिक मृत्यु" को रूपमा प्ले। तर, काम सफल र संलग्न छ भन्दा चलचित्र मा थिएटर Fedor मा हस्तक्षेप गर्दैन।
पहिलो प्रतिष्ठित फिल्म भूमिकाको
ऐतिहासिक श्रृंखला "महल Revolutions को रहस्य" (2000-2001), एक भन्दा बढी पालन-अप छ जसमा हाम्रो नायक फेडोरा Surova प्ले। भूमिका वहन र एक प्रमुख थियो, तर, त्यो मूर्ख प्ले छैटौं फिल्म रूपमा Fedor, धेरै भूमिकाको खुला मदत र सातौं मा - डाकू। उहाँले फिल्म 2003 मा "संसारमा सबै भन्दा राम्रो शहर" मा मुख्य सम्पादक को छविमा गरे। यस वर्ष "ट्याबलोइड कवर" फिलिम, "एक जीवन," "Sibirochka" मा Fedor भूमिका दिनुभयो। Dobronravov Fedor, जसको Filmography प्रतिभा र प्राकृतिक करिश्मा कारण widened, दुई अद्भुत छोराहरू लागि कृतज्ञ - इवान र विक्टर (पनि एक अभिनेता) र एक सुन्दर पति। खैर, विक्टर टिभी श्रृंखला चिरपरिचित भए उहाँले Fedor Korotkov प्ले जहाँ "सुन्दर जन्म छैन", र इवान फिल्म "द रिटर्न" मा मुख्य भूमिका मिल्यो।
2006 मा, एक श्रृंखला "Kadetstvo" तत्काल फरक उमेर समूह बीच लोकप्रिय बनेको बाहिर स्क्रीन। Fedor फिल्म र आत्म धार्मिक र inflexible Suvorov Levakov मा cadets को एक एक पिता खेल्छ, र इवान। यो हाम्रो हिरो एक राम्रो सानो भूमिका छ कि जस्तो थियो, तर उहाँले यस्तो प्रत्यक्ष र रमाइलो सम्झना छैन! सिनेमा Fedor Dobronravov - सधैं राम्रो मुड र एक मुस्कान छ, कुनै कुरा के भूमिका यो काम। तल हामी ती चित्रहरू हेर्न हुनेछ, ज्यादातर कारण जो हाम्रो नायक प्रेम र चिन्न पनि छ।
Alexey Yakimenko - Dobronravov Fedor Filmography धेरै ध्यान योग्य, प्रहरी कप्तान को भूमिका मा शो मा देखा पर्नुभयो। प्लट - युद्धपछिको ओडेसा मा डाकुओं को सैन्य शक्ति विरुद्ध संघर्ष। यहाँ हाम्रो नायक जस्तै र सख्त प्रहरी छ, तर केही दृश्यहरू आफ्नो गहिरो प्राण, समस्याका, विश्वासघात अस्वीकार देखाउँछ। फेरि, एक प्रमुख भूमिका, तर Dobronravov "उत्कृष्ट" को रूपमा प्ले।
2008 जहाँ, धेरै अन्य चिरपरिचित अभिनेता संग, एक प्रमुख भूमिका र Dobronravov Fedor प्ले छ सबै दर्शकहरु, यो ठूलो परिवार शो, प्रस्तुत। नयाँ रिबन संग रूपमा आवश्यक रूपमा धेरै Replenish गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सफलता पछि उहाँलाई Filmography, र यस्तो कृति सफल असम्भाव्य छ। यहाँ हाम्रो नायक - हृदय कहिल्यै गुमाउन गर्ने पति, मित्र, हजुरबुबा, बुबा, एक incorrigible optimist छ र परिस्थिति मा एक तरिका बाहिर देख्नुहुन्छ पहिलो नजर मा मरेको अन्त हुन्छ। हो, प्लट, उहाँले सचेतक आफ्नो साथीसँग दिन छैन, तर काम, बगैचा, परिवार र प्रियजनहरूलाई बारेमा बिर्सनुहुन्न कहिल्यै। यो शो हेरेपछि धेरै बच्चाहरु नै कष्ट-मुक्त हजुरबुबा Vanya सधैं सुन्नुहुन्छ गर्ने बारेमा सपना र lurch मा छोड्न कहिल्यै।
हो, "स्वैट" समय मा शूटिंग खपत, तर Fedor पनि "पिता छोरी", "भाइहरूले Karamazov", "Kremlin cadets", "रेडियो दिन", "रानी मा Humanoids 'जस्ता एकदम लोकप्रिय चलचित्रमा तारा अङ्कित गर्न व्यवस्थित छ "प्यासेन्जर", "नयाँ दर"। को भारी समय भए तापनि सबैतिर ठूलो प्ले Fedor, कुनै एक अभिनेता falsehood मा आरोप गर्न सक्नुहुन्छ।
2010 विश्रामहरू सबै रेकर्ड
यस वर्ष समयमा, अभिनेता गरेको Filmography 10 भन्दा बढी फिल्म द्वारा पूरक! को "railwaymen-2" मा उनी र Kalyadin पावेल Andreevich, र, र चलचित्र "Moskva.Ru" मा ट्याक्सी को चालक, र प्रेम ससेज मा madly छ मानिस "मास्टर को अन्तिम रहस्य", फिल्म "के पुरुष टक बारे" मा मा इवान। यो वर्ष सबै टेप टाढा छैन, तर केवल लोकप्रिय। तर, तिनीहरूलाई प्रत्येक उहाँले एक मजाक गर्न, wriggle गर्न रुचि। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, एक जोकर बन्ने सपना अझै पनि आंशिक सत्य हो, तर यो सबै भूमिकाहरू "एक धमाका साथ" दर्शक पूरा गर्दछ।
«Allinclusive, वा सबै Inclusive"
यो फिलिम को पहिलो भाग 2011 मा जारी र सबै दर्शक गर्न मुस्कान को धेरै दिए थियो। अचम्मको कुरा छैन, प्लट धेरै, हास्यास्पद एक बिट शानदार, तर वास्तविकता को deprived छैन। सजाय एक जलन पति, आँधी रात डाक्टर खर्च गर्ने पत्नी को, Edik द्वारा जोगिन - सम्भव एन्ड्रयू हो - रुबल मा एक महंगा पशु चिकित्सा क्लिनिक मालिक? यो चलचित्र हेर्न, भावना को एक किसिम को अनुभव र हाम्रो नायक को खेल रमाइलो। 2013 मा, Fedor Dobronravov एउटा नयाँ फिल्म -। «Allinclusive, वा एकमुस्ट-2" यो कुनै कम हास्यास्पद कथा, राम्रो मुड दिन डिजाइन गरिएको छ।
"विनिमय मा भाइहरूलाई"
2013 THEODORE उहाँले जुम्ल्याहा दाजुभाइ मध्ये एक खेल्छ जहाँ यो श्रृंखला, मा एक प्रमुख भूमिका दिए। तिनीहरूले एक पूर्ण बिभिन्न भाग्य छ। एक - शहर मा एक सफल व्यवसायी, अन्य - स्थानीय बन्दोबस्त बसोबास गर्ने कैदी। संयोगले तिनीहरूले ठाउँहरू परिवर्तन। यहाँ र रमाइलो सुरु हुन्छ। अब तिनीहरूलाई प्रत्येक जन्म विदेशी हुन् भनेर जीवनको अवस्था भिज्न र दुवै आर्थिक र व्यक्तिगत समस्याहरू धेरै समाधान छ। शो कसरी हुनेछ? हामी आगामी तपाईंको हेर्ने बिगार्छ छैन, तर केवल Fedor Dobronravov बस irresistible छ भन्छन्। दुई फरक भूमिका - र यो आवश्यक छ भने, त्यसैले प्राकृतिक छ।
ती कामहरू, जो सबै बाहिर Fedor Dobronravov सम्पूर्ण सूची थियो। हामी "आमा" (2012), "निगरानी" (2012) जस्ता टेप बारेमा बिर्सनु हुँदैन, "Piranha" (2011), (2010), "सन्ताप नहीं" (2010) र धेरै "प्रत्येक यसको आफ्नै युद्ध छ" अरूलाई। तर, हामी ख्याति पहिचान र सार्वभौमिक प्रेम गर्न नेतृत्व कि आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिलिमहरु निर्दिष्ट गर्न प्रयास गरेका छन्। हामी हाम्रो नयाँ नायक योग्य भूमिका इच्छा र आफूलाई स्क्रीन अगाडि फेरि usyadus सम्म impatiently प्रतीक्षा र हामीलाई ठूलो खेल आनन्द र नयाँ भावना प्राप्त दिनु हुनेछ। यो सबै Fedor मिल्यो कसरी कठिन छ, र उहाँले केही स्टप दिन्छ बुझेर हामी यो सूची एक पटक भन्दा बढी अद्यावधिक हुनेछ भनेर ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ।
विद्यार्थी र schoolchildren बारेमा अमेरिकी कमेडी
अभिनेत्री एमिली Mortimer: जीवनी, उत्कृष्ट काम, व्यक्तिगत जीवन
Pokemon Mewtwo: वर्ण को विवरण र एनिमे आफ्नो उपस्थिति
प्रतिभाशाली अभिनेत्री Shannen Doherty: "क्यान्सर मलाई तर्साउन छैन, अज्ञात को डर"
किन Harry Potter एक जादू छडी प्रयोग दृष्टि हाल conjured?
पुरानो vampire चलचित्र: एक सिंहावलोकन, वर्णन र समीक्षा
Pokeweed को औषधीय गुण: प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
Alpinestars - motorcyclists लागि फिर्ता रक्षक
तेस्रो रोम - यो छ ... किन मास्को - तेस्रो रोम?
महिलाहरु पर्स सही चयन गर्नुहोस्।
को परी कथा "द सलगम" पहिलो प्रकाशित भएको थियो जब, र अन्य विवरण
Irina Muromtseva कहाँ ज्ञात गर्नुभयो रूसी टिभी प्रस्तोता?
अपूर्ण उत्पादन लेखा र यसको प्रकार
शेरी मिलर: फिल्मोग्राफी
लेजर बाल हटाउने वा Elos: राम्रो, मतभेद, समानता र समीक्षा छ
भ्रष्टाचार मृत्यु: लक्षण र नतिजा
Euthanasia के हो
हाइपोपिट्यूरेटार: लक्षणहरू, निदानको उपचार र उपचार